Ndingaite sei kuti ndiise mwenje wekusarura kuitira kuti ndikwanise kuiendesa kune imwe - MediaLight Bias Lighting
Nyamavhuvhu 1, 2021
Ndingaisa sei magetsi ekurerekera kuitira kuti ndikwanise kuendesa kune imwe TV (kana kuabvisa zviri nyore mune ramangwana)?
MediaLight uye LX1 Bias Mwenje inotsigirwa ne3M VHB (Very High Bond) inonamira. Iyi iglue yakasimba uye isu takadzorera kumashure kubva kune yakajairwa 3M yekunamatira muna Nyamavhuvhu 2017, apo yedu MediaLight renji yakatanga kudonha kubva kune nyowani LG OLED pamwe nemhando dzakasiyana siyana dzeSamsung. Chaizvoizvo, vatengi vaizoisa mwenje manheru uye kumuka kuti vaone mwenje mumurwi pasi. Isu takaona kuti isu taifanira kukwidziridza kunamatira kwedu.
NeVHB, izvi hazviitike futi (tepi yekunamatira yakasimba zvekuti inoshandiswa kusunga windows uye simbi yekunamatira kuBurj Khalifa muDubai). Nekudaro, izvi zvinotungamira kumibvunzo yakawanda senge:
"Ndingabvise sei mwenje wekutsvetera kubva muTV yangu?
"Ndingaisa sei mwenje wekutsvetera?"
"Ndinofambisa sei mwenje wekutsvetera kune imwe TV?"
"Ndinobvisa sei zvisaririra zvemwenje?"
Vamwe vanhu vanoshandisa tepi yemupendi kuisa marambi. Vamwe vaizoshandisa tepi yemagetsi. Isu takaona kuti vazhinji vedu vashandisi vehunyanzvi vaishandisa gaffer tepi, iyo, sezvinobvumwa, vazhinji vashandisi pamba havana kugara vakatenderedza.
Mukuenderana nechinangwa chedu chekugara tichichinja chigadzirwa chedu, isu tave kupa mahara ma mini rolls e gaffer tepi nechero MediaLight kana LX1 kutenga. Zvese izvo iwe zvaunoda kuti uite kuwedzera kune iyo odha uye yakajairwa $ 3.50 yekuchaja (iyo inosanganisira kutumira kune yakamira ega maodha - iyo mutero yakaderera pane mutengo wepositi) yabviswa.
Tinya apa kuti utore yemahara gaffer tepi nemwenje yako!
Isu tinofunga kuti gaffer tepi yakanakira kushandiswa kweimba yemitambo, kunyangwe ichishandiswa kuisa mwenje wekusarudzika kana kubatsira kudzora tambo dzisiri-dze-kudzora. Uye kune vashandisi vehunyanzvi, isu tinofunga kuti edu mini-roll akakwana kune rako bhegi, bhegi rekamera kana laptop bhegi. Panenge saizi yemupumburu wematepi emagetsi, zviri nyore zvakanyanya kupfuura kutenderedza rakatenderedza rakakura roll regaffer tepi.
Previous nyaya Nei MediaLight isiri kutengeswa paAmazon.com?
inotevera Kutaura nezve kubatira mwenje pane iyo Murideo chiteshi